8 intshi ompompi wokugezela obanzi
Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / WOWOW 8 Ku. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esinezibambo ezimbili ku-Chrome
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 22 izilinganiso ikhasimende
(22 Izibuyekezo ikhasimende)
Isikhiphi sokugezela esiphakeme se-arc esine-7-design ekhethekile, nakanjani sinikeza ukuthinta okhethekile kunoma iyiphi indawo yokugezela. Abaklami be-WOWOW baziwa kabanzi ngokuhlala njalo besha imiklamo enesibindi ukwenza umehluko ngemishini yokugezela yayo. Ngenxa yalokho, imishini yokugezela ye-WOWOW ihlala ihluke kakhulu kwamanye amafenisha okugeza oyowathola. Lokho kukusiza ukuba unikeze ikamelweni lakho lokugezela ikhethelo elikhethekile nelingafani nalokhu. Lesi sici esiyingqayizivele uzothola egumbini lokugezela isikulufu sokukhanya se-chrome 2 izibambo ze-WOWOW. Le faucet yokugezela nakanjani izonikeza ukuthuthuka okumangalisayo endlini yakho yokugezela.
Isikhiphi sendlu yokugezela yesiliva enezimbambo ezi-2 sinikeza ukuphela kwe-chrome-efana ne-chrome. Lokhu okubizwa ngokuthi okuyisitayela sezeyize kuyinto eyisimanga ngakho-ke kufanelekile kakhulu kunoma yisiphi isitayela sokugezela sanamuhla. Le faucet yokugezela ye-chrome ibipheswe kalula ukuze inikeze ukuthinta okuhle kuleyondawo isendlalelo sokugeza isigcini se-chrome 2. Ingxenye evamile ecwebezelayo ye-chrome isanda kuncishiswa kancane ukuze inikeze ukubukeka okukhethekile. Njengoba ukwazi ukubona, i-WOWOW ibheka izindlela ezahlukahlukene zokwenza igumbi lakho lokugezela likhetheke futhi lihlukile.
Izinzuzo zendlu yokugezela isikulufu sokugezela chrome 2 isingatha ngamafuphi:
SKU: 2320300C Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: I-American standard, phatha kabanzi, izibambo ze-lever
Bengingalindele ukuthi umpompi oshibhile kangako uma kuqhathaniswa nekhwalithi yawo. Ifana ncamashi naleyo ebengiyifuna esitolo kepha hhayi ebiza kakhulu. Kulula kakhulu ukuyifaka, ihlanzekile futhi inhle kakhulu. Ngithanda kakhulu ukuthi kuhamba kanjani nganoma yikuphi ukwakheka kwendlu yangasese nosinki. Ikhwalithi ephezulu kakhulu. Iqinile futhi iyaguquguquka futhi ibukeka iqinile kakhulu. Amabala awagxili ebusweni bompompi kodwa noma ngabe akwenzekile kuhlanzekile okulula. Okokugcina kodwa manje okuncane kakhulu, ikhanda lepayipi lijikeleza ama-degree angama-360, okulula kakhulu ngenkathi ngigeza ubuso bami noma ngixubha. Kwenziwe kwaba lula ngempela.
Lompompi muhle impela, ubukeka umuhle kakhulu .Ukupakisha kuyaqikelela, ingxenye ngayinye inesikhwama sayo esizimele esingeluki. Ukugeleza kwamanzi kukhulu, futhi isibambo sizwela kakhulu, ngiyaneliseka kakhulu ngalokhu kuthengiwe. ompompi awubizi, kepha ophatha ngesandla ubiza kakhulu. Ngiqashe umuntu osebenza kahle futhi kumthathe amahora ama-2.5 ukufaka ompompi wami omusha. Ngoba ompompi bakudala babuthuntu, kunzima ukuwususa, kepha kufanelekile.
ipayipi elinesisindo. kulula kakhulu ukuyifaka futhi ungabona ukuthi yikhwalithi enhle eyodwa. ngiyethemba ihlala isikhathi eside kakhulu
Linda inkosi ifake! Izinto zekhwalithi. Ukuma nombala kulungele kakhulu indlu yami yokugezela!
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esinezintengo ezisezingeni eliphakeme Ngithanda ukuphatha izibambo ezinamakhodi konke kubonakala sengathi kwenziwa ngekhwalithi ephezulu idreyini ye-pop-up ishibhile kancane kodwa akekho noyedwa ongayibona uma isifakiwe ibukeka kahle. Thanda umklamo thanda ikhanda elikhulu lepompo elinegumbi elengeziwe ukuze uthole izandla zakho lapho futhi ukwazi ukugeza ubuso bakho i-ECT. Iza nakho konke okudingayo ngaphandle kwamathuluzi wokukufaka. Thanda ukujika okungu-360 degree. Ngikhethe eyodwa ngenxa yokwakheka kwayo kubukeka kumnandi impela isitayela sami. Kuyajabulisa ukubukeka kukuhle kumuntu njengoba kwenza esithombeni futhi kuyingxenye enhle kakhulu engabizi.
lokhu bekuzothatha indawo yepayipi engilifakile eminyakeni engaphezu kwengama-40 eyedlule elaliqala ukuvuza. Intuthuko ngokuhamba kwesikhathi iyamangalisa. Amasongo e-O esikhundleni sokusebenzisa ama-plumbers putty ingasaphathwa eyokufakwa. Lokhu kwakulula kakhulu kunompompi ababekade bekhona. Kubukeka futhi kusebenza kahle. batusa kakhulu.
Ngempela sithenge lo mdlalo wesitendi sethu esisha sodwa kubhavu ngoba besifuna into ende. Bekufanele sithenge ipulagi ehlukile yokuhambisa amanzi esazi ukuthi sizoyenza ngoba lokhu kwenzelwa usinki wokugezela. Umdlalo ubukeka umuhle kubhavu. Ngijabule kakhulu ngayo!
Umpompi obukeka kahle. Sisanda kuyifaka futhi asikaze sibe nezinkinga ngayo kuze kube manje. Ifanisa nezinye izinsimbi zokugezela. Umpompi Usakazeka ukunikeza indawo yokugezela ukubukeka okuhle, izinkanyezi ezinhlanu.
Kuyafaneleka yonke ipeni elilodwa !!! Usinki wami ubukeka umuhle futhi kulula ukufaka. Ngincoma kakhulu. Kubukeka sengathi ompompi kanokusho.
Lapho uthenga uhlobo olukhethwe ngokukhethekile, luyakuthanda ukuthinta ngeke lushiye isigxivizo somunwe. Lapho ngithola izimpahla, ngathola ukuthi ngenze ukhetho olufanele. Kwakubonakala kusezingeni eliphezulu futhi kusinda ukubamba ngesandla sami.
Umpompi okahle kakhulu. Ikhwalithi ephezulu. Iqinile. Isiphetho esihle. Kupakishwe kahle. Bengisebenzisa i-sink encane yokusiza. Thanda ukuthi iyaswayipha.
Le ngenye yompompi omkhulu wezindlu zangasese, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ipayipi lami lokugezela laliqhekeke ngokuphelele, ngakho-ke vele ufake le ompompi entsha ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, futhi isebenza kahle futhi yenza indlu yangasese yami ibukeke igcwele ngokwengeziwe, ngiyithandile, futhi umndeni wami wonke uyayithanda!
Ngakho-ke angikwazi ukusebenzisa ompompi ukuthi ibingafani ne-hardware yami yamanje. Bengicabanga ukuthi yikhwalithi enhle kakhulu futhi enhle. UPlumber uthe ngeke abe nenkinga yokufaka ngakho ngicabanga ukufakwa okulula. ngidumele akuhambanga bekuzobukeka kahle!
Angikholwa ukuthi ngiyimise ngedwa futhi ngithatha imizuzu engama-30 kuphela. Lesi yisikhathi sami sokuqala ukufaka ompompi okusho ukuthi kulula kakhulu ukuyifaka. Kubukeka kukuhle futhi kunesitayela endlini yami yokugezela.
Le ompompi kulula ukuyifaka. Mina nomyeni wami asinakho okuhlangenwe nakho kompompi wokufaka, kepha sizenzele ngokwethu ngokulandela imiyalo. It has a ukubukeka nenhle phezulu countertop yami zemabula. Ikhwalithi enhle kakhulu !!! Kungcono kunalokho enginakho ngaphambili.
Bengilokhu ngifuna ukubukeka okuyingqayizivele kwendlu yami yokugezela enkulu engizobukisa ngayo. Ikhwalithi enhle nokuqina kwentengo. Ngempela ungancoma uma ukwabhajethi futhi ufuna isiqeshana esihle sombukiso.
Le ompompi ibukeka iyinhle! Inemigqa ehlanzekile. U-Plumber ubengenazo izingqinamba lapho kufakwa.
Umkhiqizo uyazikhulumela. Ukufakwa kwakunzima kancane kunokujwayelekile ngenxa yedreyini yakudala. Kuthathe isikhathi eside ukuyikhipha kodwa ngemuva kwalokho konke kwahamba ngendlela obekuhleliwe ngayo. Bheka izithombe, njengoba ngishilo, lo mkhiqizo uyazikhulumela
Lapho umfana wami eqala ukubheka zonke lezi zingxenye, wathukuthela wathi "pex" ngathi yigama elingcolile. Ngesikhathi eqeda ukufaka le ompompi, wayecula izingoma zanoma ngubani owaklame lokhu, futhi ebuza ukuthi kungani konke ukulungiswa kwamapayipi kungekuhle kangako. Ngijabule kakhulu ukuthi ngikhethe le ompompi. Ngaphandle kokulula, ngicabanga ukuthi yinhle.
Isitayela ebengisifuna kanye nompompi ubukeka umuhle futhi usebenza kahle. Kwafika kugcwele ngokucophelela izinto eziyisisekelo nezikhombisi-ndlela. Bekufanele ngifakwe i-plumber ngoba izingxenye zompompi wakudala bezingeke zinyakaze futhi ama-valve wokuvala ekugcineni adinga ukushintshwa, ngakho-ke ngijabule ukuthi bekuyintengo enhle futhi.
Thepha okwesabekayo ngemali. Iza nokufakwa kokuminyaniswa okungu-3/8, okwenza ikwazi ukuzivumelanisa kalula nokufaka okuningi kosinki.
Inezimfanelo zompompi eziphindwe kabili kunentengo.
Sinezinto ezintsha zokugezela ezifakiwe ezingafikanga nompompi, ngafuna abaningi ngathola le emnyama ukuthi ngiyisebenzise lapho ethola ukusetshenziswa okufanele, kulula kakhulu ukuyicindezela / ukuyidonsa. Kulula ukulandela iphepha kuza nebhokisi, okuqinile, okukhanyayo, ukubukeka okuhle.Ngokunye lokhu, lokhu kulula ukufaka ompompi futhi kubukeka buhle impela ngaphezulu kweziqongqwane zethu ezintsha ze-granite counter.